RGB LED Strip Light COB 378 *3LEDs / m ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ - Light On
Home > Products > LED Strip Light > RGB COB LED Strip > RGB LED Strip Light COB 378*3 LEDs/m
RGB LED strip light COB 378 *3LEDs / m သည်နည်းပညာအသစ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် COB ဦး ဆောင်သောမီးများကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင် RF Controller နှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားသည်။ ၎င်းကိုနောက်ဘက်တွင် 3M ကော်တိပ်ဖြင့်အလွယ်တကူတပ်ဆင်ပြီးတီဗီနောက်ခံ၊ ဘားမီး၊ မီးဖိုချောင်အလင်း၊ အိပ်ခန်းအလင်း၊ ပါတီအလင်းစသည့်နေရာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးနိုင်သည်။ ရောင်ခြည်ထောင့်သည် ၁၈၀ ဒီဂရီအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အများကြီးတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
RGB LED Strip light COB 15W 378 *3LEDs / m သည်အလင်း၊ အစိမ်းနှင့်အပြာ COB ချစ်ပ်များကိုရင်းမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် chip မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖုံးအုပ်ထားသည့် arc fluorescent colloid နှင့် substrate မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မြင့်မားသောရောင်ပြန်ဟပ်သောအလင်းပြန်မှုမှင်များမှတဆင့်ထုတ်လွှတ်သည်။ သင်၏အထူးလူနေအိမ်အလှဆင်မှုနှင့်ဒီဇိုင်းကို DIY အဖြစ်ဖြတ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
2. ကုန်ပစ္စည်း Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်) RGB LED strip light COB 378 *3LEDs / m
Product name: RGB LED Strip light COB 378 *3LEDs / m IP rating: IP20
Model No.: LION-NC1D24AD20-XX-1134 Operating Temp.: -25°C~ +45°C
FPC Width: ၁၂ မီလီမီတာ သိုလှောင်ရုံ -25°C~ +70°C
Light source: COB LED စံအလျား5meters
LED အရောင်: RGB Certification:
အရောင် Temp .: / အာမခံချက် - ၃ နှစ်
SDCM N / A Packing method:5မီတာ / reel / အိတ်
Beam ထောင့် 180° အချက်အလက်ထုပ်ပိုး။ : 50 reels / box ကို
Luminous Flux: N / A သေတ္တာအရွယ်အစား: 500*356*206mm
RGB LED Strip light COB 15W 378 *3LEDs / m သည် DC24V ပါဝါနှင့်၎င်းသည်အသွင်အပြင်လက္ခဏာများရှိသည်။
· 180 ဒီဂရီရောင်ခြည်ထောင့်
၅။ RGB LED Strip Light COB 378 *3LEDs / m ၏ပို့ခြင်း၊ ပို့ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ RGB LED strip light COB 378 *3LEDs / m သည်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောပစ္စည်းများနှင့်ကောင်းစွာထုပ်ပိုးထားသည်။ အသေးစားသို့မဟုတ်နမူနာအမှာစာများကိုအမြန်ဆုံး UPS၊ FedEx သို့မဟုတ် DHL မှဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ အလွန်ကြီးမားသောအမှာစာများအတွက်ပင်လယ်ကုန်တင်ပိုပိုသည်။
hot Tags:: RGB LED Strip Light COB 378 *3LEDs / m, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်းဝယ်, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်, အခမဲ့နမူနာ, စျေးနှုန်း, အဆင့်မြင့်၊ ဖက်ရှင်၊ အရည်အသွေး